Kala-baxa ilmo-galeenka, Dhaqdhaqaaqa Dareenka, Tababaraha Dhexda, Jilibka Brace - Shiheng Medical
Garabka Sport Garabka Neoprene Garabka Elastic ...
Si Fudud Oo Loo Xidho Cabbirka Cabirka Bilaashka ah ee Gacanta Neefsashada ...
Suunka Caloosha Laastikada Oo Neef Loogu Talo Galay Haweenka
Uurka Neefsashada Neefsashada Nasiibka Caloosha ...
Anping Shiheng Qalabka Qalabka Caafimaadka Co., Ltd. Waa shirkad takhasus gaar ah u leh qalabka caafimaadka iyo isboortiga oo iibisa qalabka caafimaad ee baxnaaninta & qalabka isboortiga Shirkaddu waxay leedahay warshad u gaar ah, oo baaxadeedu ka badan tahay 12000 mitir murabac, oo leh afar aqoon isweydaarsi qalliin iyo in ka badan 200 shaqaale farsamo khibrad leh. sidoo kale hogaamiya bixiyeyaasha taageerada orthopedic ee waqooyiga Shiinaha.
Nagu saabsan >>
Sidee loo doortaa xusulka suxulka?
Marka hore, aan ka hadalno waxa uu yahay xarig gogol xaaraantu waa nooc xarig ah oo la dhigo meel ka baxsan jirka si loo xakameeyo dhaqdhaqaaq gaar ah oo jirka ah, taas oo gacan ka geysaneysa saameynta daaweynta qalliinka, ama si toos ah loogu isticmaalo hagaajinta dibadda ee daaweynta aan qalliinka ahayn. Isla mar ahaantaana, ku darista poin cadaadiska ...
Adeegsiga jilbaha lugaha
Jilib jilibku waa nooc ka mid ah qalabka ilaalinta ee dhaqan celinta. Si looga hortago bukaanada qalliinka ka dib qalliinka jilibka in la saaro malaas culus oo hawo leh, jilbaha jilbaha ayaa si gaar ah loogu talagalay bukaannada qalliinka wadajirka ah ee jilibka ka dib. Xagasha jilibka la isku hagaajin karo. Qalabka jilibka ee jilibka ayaa iska leh xayawaanka ...
Waa maxay kab kabtu?
Kabayga farta ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo farta dhaawacan. Shaqadeeda ugu weyni waa inay farta sii hayso oo ay ka ilaaliso farta inay foorarsato. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ka caawin kartaa farta inuu ka soo kabto arthritis-ka, qalliinka, qalliinka, iwm, ama sababo kale. . Kabarooyinka farta lagu sameeyo ee gacanta lagu sameeyo badanaa waa ...
Waxaan diirada saareynaa tayada wax soo saarka